Renato Sanches oo xaqiijiyey inuu ka tagayo kooxda Bayer Munich – Gool FM
(London) 18 Agoosto 2019. Laacibka khadka dhexe ee Renato Sanches ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu ka tago Bayern Munich, sababo la xiriira daqiiqadaha yar ee uu u ciyaarayo kooxda koowaad.
In kastoo lagu qarash-gareeyay 60 milyan oo gini bishii Luulyo ee sanadkii 2016-kii, 21-jirka ayaa kaliya ku soo bilowday safka hore 10 kulan oo horyaalka Bundesliga ah, iyadoo 25 kulan oo kale uu ka soo kacay kursiga keydka.
Kulankii ugu dambeeyay wuxuu yimid intii lagu guda jiray kulankii ay barbaro 2-2 la galeen kooxda Hertha Berlin habeenkii Jimcaha, taasoo keentay in xiddiga reer Portugal uu ka caroodo kaalintiisa haatan.
Sanches ayaa u sheegay Sport1: “Shan daqiiqo iguma filna, xaaladdan iguma wanaagsan aniga, tani waa markii labaad ee aan doonayo inaan ka tago kooxda, mana aysan ii ogolaan.”
Madaxa fulinta kooxda ee Karl-Heinz Rummenigge ayaa ku adkeystay inaysan jirin qorshe ay ku iibinayaan Sanches inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee haatan.